Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Jijjiirraan imaammataa biyyattii guddittii addunyaa keessatti tahaa jiru jaallannus jibbinus nun hanqatu
Jijjiirraan imaammataa biyyattii guddittii addunyaa keessatti tahaa jiru jaallannus jibbinus nun hanqatu
(Yaya Beshir/Boruu Barraaqaa irra)
Waan nu miidhus waan nu fayyadus numa qabaata. Miidhaan nutti fide maal akka tahe namuu quba qaba waan taheef sanirraa dubbachuu nan barbaachisu. Dantaa jijjiirraa imaammataa kanaan argamu keessaa waan tokko qofa ammaaf haa laallu. Nama keenya biyya ambaa jiraatu keessaa hangi mirga abbaa biyyummaa isaaf quuqamee wareegama baasaa jiru xiqqaa dha. Warra qabsichaaf gumaata gochaa jiru irra warra usee daaw'atutu caala. Warra mi'aa biyya ofii dagatee biyyuma ambaa ho'ifatee hafeef bilbila dammaqsituu guddoo dhageessisaa jira. Warra qabsoo mirga abbaa biyyummaa kana sababa adda addaatiin hifatee manatti galeef furmaanni jirtu takkittiin jabaatanii biyya ofii ganamaa san irratti abbaa tahuu malee wabiin akka hin jirre sagalee guddaadhaan itti himaa jira.
Biyya ofii irratti abbaa tahuuf jecha caalaa walitti dhufanii maryachuu, wal danda'anii waliin qabsaayuu, dhaaba siyaasaa kallacha namaa tahee qabsoo hogganu qarachuu, qabeenya ofii osoo hin qusanne kaayyoo qabsoo biyya abbaa biyyummaatiif oolchuu akka qabnu nutti lallabaa jira. Akkasumas warra amantii jala goree qabsoo mirga abbaa biyyummaa tana akka 'siyaasaa'tti lagatee keessaa galeefis dhaamsa garaadhaa hin badne itti ergaa jira. Amantii ofii bilisa tahanii hordofuuf bakki wabii qabdu biyya dhaloota ofii qofa tahuu itti himaa jira.
Kana malees baqattummaan qabsoo bilisummaaf furmaata akka hi taanes akeekaa jira. Dhugaa dha, namni jaalatee biyya ofii irraa hin baqatu. Haa tahu malee biyya namaa abadatanii 'du'a jalaan of baasa' jechuun biyya fagoo yaaduun haga barbaachisu irra akka ol hin guddanne gorsa nuu kennaa jira. Lakkoofsi baqataa keenyaa gad xiqqaatee lakkoofsi qabsaayaa keneyaa akka ida'uuf gumaacha godha jedhamee eegama.
Biyya ofii kan irree diinaa jala jiru diina jalaa baafatanii abbaa itti tahanii bilisummaa waaraa argachuun barbaachisaa tahuu isaa warra dagate dammaqasanii ija banachisuuf faayidaa qaba. Kun hundumtuu garuu yoo warri dursee dammaqe irratti hojjetee fi haala mijeesse qofa milkaaha.
Posted by Hasan Ismail at 9:48 AM